Budada Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate waa a.
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate budada (856681-05-5) video
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate (856681-05-5) Qalabka
Product Name Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate budada
Magaca Kiimikada Lorcaserin hydrochloride, (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride hemihydrate; (R) -8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1h-3-benzazepine hydrochloride hemihydrate
Molecular Formula C22H32C4N2O
Molecular Wsideed 482.31
Biological Life-Life Lorcaserin wuxuu leeyahay nolol kala badh xiga saacadaha 11
milmi Sifeynta Biyaha 0.0709 mg / mL
Application Root Lorcaserin hydrochloride hemihydrate budada loo isticmaalo daroogada ka hortagga buurnida. Waxay leedahay door ahaan niyadjab cunno-qabe iyo xannuun serotonergic ah.
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate budada (856681-05-5) Sharaxaad
Kiniiniga Lorcaserin hydrochloride hemihydrate waa gaasta oo ah nooca hemihydrate ee lorcaserin hydrochloride. Waxaa loo isticmaalaa daroogada ka hortagga uurka. Waxay leedahay door ka mid ah niyadjab qabe xanuunka iyo agonoye serotonergic. Waxaa ku jira lokcaserin hydrochloride.
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cayilka la xariira kolestaroolka sare, cadaadiska dhiigga oo sareeya, ama nooca sonkorowga 2.
FDA waxay oggolaatay budada Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate loogu talagalay dadka cayilan (oo leh miisaanka jirka ee jirka, ama BMI, 30 ama ka sarreeya) ama kuwa culus (BMI of 27 ama ka sarreeya) iyo sidoo kale ugu yaraan hal miisaan culus - Xaaladda caafimaad ee la xariira sida Nooca sonkorowga 2, cadaadiska dhiigga sareeya ama kolestaroolka sare.
Root Lorcaserin Hydrochloride Hemihydrate ayaa shaqeeyaa iyadoo xakameysa rabitaanka cuntada - gaar ahaan iyada oo la hawlgelinayo xayawaanka maskaxda ee serotonin, nurotransmitter oo kiciya dareenka sinnaanta iyo qanacsanaanta. Serotonin ayaa sidoo kale ku lug leh niyadda; daawooyin badan oo liddi ku ah antidepressant-ka ayaa ka shaqeeya kahortagga dib-u-qaadista serotonin iyo ilaalinta qashinka maskaxda ee ku jira kiimikada. Cilmi-baadhayaasha Arena ayaa sheegaya in dawooyinkooda loogu talagalay in ay raadsadaan kaliya soo-saareyaasha serotonin ee saameeya rabitaanka cuntada.
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate budada (856681-05-5) Mashruuca Waxqabadka
Lorcaserin waxaa la rumeysan yahay in uu yareeyo isticmaalka cunnada isla markaana kor u qaado satilka iyada oo si xushmad leh loo xakameeynayo xarumaha 5-HT2C ee kudhisan daawooyinka pro-opiomelanocortin anorexigenic ee ku taal hypothalamus. Habka saxda ah ee ficilka lama yaqaan.
Lorcaserin ee qiyaasta lagu taliyey ee maalin walba lagu doorto waxay kala dhexgalaan xayirada 5-HT2C marka la barbar dhigo xarumaha 5-HT2A iyo 5-HT2B, eeg qaybaha kale ee 5-HT, gaadiidka 5-HT, iyo 5-HT resuptake sites .
Codsiga of Lorcaserin hydrochloride hemihydrate budada (856681-05-5)
Cunto diiqadeysan: Wakiilka loo isticmaalo inuu yareeyo cunto xumo.
Calaamadaha xanuunka 'serotonergic agonist': Wakiilka leh jilicsanaanta xayawaanka serotonin wuxuuna awood u leeyahay inuu saameyn ku yeesho serotonin by kicinta dhaqdhaqaaqa jireed ee duubista unugyada. Serotonin agonists waxaa loo isticmaalaa sida antidepressants, anxiolytics, iyo daaweynta xanuunka dhanjafka.
Lagu taliyay Lorcaserin hydrochloride hemihydrate budada (856681-05-5)
Tan iyo markii macluumaadka muhiimka ah ee isticmaalka Lorcaserin hydrochloride hemihydrate aan la heli karin, macluumaadka soo socda ayaa loogu talagalay keliya tixraaca:
Qiyaasta lagu taliyey ee lorcaserin waa 10 mg oo afka laga qaato laba jeer maalintii. Lorcaserin waxaa laga yaabaa in la qaato iyada oo aan loo eegin cuntada. Lorcaserin waa in laga joojiyaa bukaanada kuwaas oo ku fashilmay in ay gaaraan ugu yaraan 5% miisaan lumis todobaadkii 12 maadaama bukaanadani aysan u dhicin inay lumiyaan miisaan macquul ah oo leh daaweyn socota.
Faa'iidooyinka Lorcaserin hydrochloride hemihydrate budada (856681-05-5)
Lorcaserin Hydrochloride Hemihydrate waa budo 5-HT2C ah oo loo maleynayo inay hoos u dhigtay cunno qaadashada nidaamka POMC dhexe. Faa'iidooyinka budada Lorcaserin HCL:
Kiniiniga Lorcaserin hydrochloride hemihydrate waxaa loo isticmaalaa cuntada iyo jimicsiga si loo daaweeyo cayilka.
Kiniinada Lorcaserin hydrochloride hemihydrate waxaa mararka qaarkood loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cayilka oo la xidhiidha sonkorowga, kolestaroolka sare, ama dhiig kar.
Kiniiniga Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ma daaweyn doono xaalad caafimaad oo hoose (sida cudur wadne, sonkorow, cadaadis dhiig oo sarreeya).
Dhibaatooyinka ay keento of Lorcaserin hydrochloride hemihydrate budada (856681-05-5)
Budada Lorcaserin hydrochloride hemihydrate waxaa loo isticmaalaa daaweynta maareynta culeyska daba dheeraada ee dadka qaangaarka ah oo leh culeyska jirka (BMI) ee 30 ama ka weyn (cayilan) iyadoo lagu darayo cunno-karriin yareysa iyo jimicsi. Waxaa sidoo kale loo oggol yahay adeegsiga dadka waaweyn ee leh BMI-ga 27 ama ka weyn (miisaan culus) oo leh ugu yaraan hal xaalad oo la xiriirta miisaanka sida dhiig kar (dhiig kar), ama kolestarool sare (dyslipidemia) Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale yeelan kartaa xoogaa saameyn ah. Sida hoos ku xusan:
TIsbedelada ugu caansan ee daaweynta:
Waxyeellooyinka kale ee aan caadiga ahayn ee halista ah ee la xiriira lorcaserin waxaa ka mid ah: